राष्ट्रिय वाणिज्य वैँकमा पनि कोटा प्रणाली : एक दिनमा १० जनाको मात्र काम | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ६ माघ २०७७, मंगलवार ०७:३२
सोमबार बिहान राष्ट्रिय वाणिज्य वैँकको गोरखा शाखामा सुन धितो राखेर कर्जा लिन गएका १० जना भित्र पस्नै नपाई फिर्ता भए । अनेक विन्तिभाउ गरिरहेका उनीहरुलाई गार्डले भनिरहेका थिए, ‘क्यासिएरसापले कसैलाई भित्र नपठाऊ भन्नुभएको छ । तपाईहरु भित्र गए मैले गाली खान्छु ।’
धेरै नै चिन्ता गर्नेलाई उनले थप जवाफ दिइरहेका थिए, ‘क्यासिएरसापको सरुवा पत्र आएको छ । त्यसैले उहाँले काम गर्न छोड्नु भयो । अब पछि आउनू ।’
सो फाँटमा काम गर्ने क्यासिएर विराट किशोर श्रेष्ठले माघ १ गतेदेखि काम गर्न छाडेका वैँकले जनाएको छ । ‘बरबुझारथको प्रक्रिया चलिरहेकाले अहिले कर्जा प्रबाह रोकिएको हो’, शाखा प्रवन्धक कपिल कार्कीले भने ।
सोमबार मात्र होइन, सो वैँकमा सुन धितो राखेर कर्जा लिन जानुभयो र तपाईँ लाइनको ११ औँ नम्बरमा पर्नुभयो भने गार्डले रोक्छ । जति बिन्तिभाउ गर्नुस्, गार्डको एउटै जवाफ हुन्छ, ‘क्यासियरसाप्ले १० जनाभन्दा एकजना पनि भित्र नपठा भन्नु भएको छ ।’ पठाएमा आफूलाई कराउने उनले बताए ।
वैँकका क्यासियर श्रेष्ठको आदेशअनुसार १० जनाले मात्र प्रवेश पाउँदा टाढाटाढादेखि आएका सेवाग्राही बाहिरको बाहिरै पर्ने गरेका छन् । ‘नजिकैबाट आएकालाई त फेरि भोलिपल्ट पनि आउँदा केही फरक नपर्ला, तर टाढाबाट आउनेहरु त्यति कामका लागि होटलका बस्नुपर्ने हुन्छ’, दिनहूँ उनीहरुको समस्या देखिरहेका स्थानीय आत्माराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चिनेजानेकाले चाहिँ टेलिफोन गरेर सोर्सफोर्स लगाएर जसरी पनि काम पट्याउँछन् । टाढाबाट आउने सर्वसाधारणहरुले सास्ती पाएका छन् ।’ साधारण कामका लागि पनि क्यासियर श्रेष्ठका कारण आफूले समेत बारम्बार सास्ती पाएको उनले बताए ।
वैँकका शाखा प्रवन्धक कार्कीले भने कोटा प्रणाली नलगाएको बताएका छन् । ‘बिहान सातबजेदेखि पौने नौ बजेसम्म आउनेको काम गर्ने गरेका छौँ’, उनले भने, ‘दिउसो नभ्याउने भएर सुन कर्जाको काम बिहान गर्ने गरिएको हो । बिहान १० जनाभन्दा धेरै भ्याउँदा पनि भ्याइँदैन ।’
वैँकले सेवाग्राहीको कोटा तोक्न नपाइने राष्ट्रिय वाणिज्य वैँक, गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख प्रमोद अधिकारीले बताएका छन् । ‘सकेसम्म सेवा दिने हो, वैँकले सेवाग्राहीको कोटा तोक्नु हुदैन’, उनले भने, ‘त्यहाँ के भएको रहेछ, म कुरा गर्छु ।’